Baleno Short Pants - Red | Buy online | SHOP.COM.MM
Baleno Short Pants - Red
ဒီလိုပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့ဒီဘောင်းဘီမျိုးကအဆင်ပြေဆုံးပဲ ပေါ့ပါးတယ် ချည်သားဆိုတော့ချွေးခြောက်မြန်တယ် ရောင်စုံကိုဝယ်ထားတာ =D Read more Hide
So glad I found these shorts from Baleno! I love wearing these all the time. Read more Hide
Baleno brand ဒီဘောင်းဘီလေးက လူငယ်ဆန်ပြီး စတိုင်ကျလို့ အရမ်းပဲကြိုက်ပြီး ခဏခဏဝတ်ဖြစ်တယ်။ Read more Hide
Specifications of Short Pants - Red